နုပျိုမှုအားလုံးကို အာဆင်နယ်အတွက်ပေးခဲ့သူ – Gunners' Side
ဒီနေ့ Gunners’ Side ရဲ့ History ကဏ္ဏကိုတော့ ပေါလ်မာဆင် အကြောင်းရေးသားချင်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ပေါလ်မာဆင်က ဆိုပါတယ် … ပေါလ်မာဆင်က သူ့ရဲ့အမြင်ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ် .. စသည်ဖြင့် အပတ်စဥ်တိုင်းမှာ ၃ ကြိမ်ထက်မနဲ ကျွန်တော်တို့စာဖတ်သူတွေမြင်တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်တစ်ဦး ၊ ဘောလုံးပွဲကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် အာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ တက်ကြွစွာ အမြဲရှိနေတဲ့သူတစ်ဦး အဖြစ် ပေါလ်မာဆင်ကို ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးနေကြပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်က အခုညခင်းလေးမှာ စာဖတ်သူများအတွက် သူ့အကြောင်းတွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက်တင်ပြလိုပါတယ်။ ပေါလ်မာဆင်ဆိုတာ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ဘောလုံးရာသီပေါင်း ၁၂ ရာသီတိုင်အောင်ကစားခဲ့တဲ့9Role တိုက်စစ်မှုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသင်းရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားစာရင်းမှာ အဆင့် ၂၆ အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ကစားသမားဘဝနှောင်းပိုင်းမှာတော့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်သမား ၊ Player Maker စသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲကစားခဲ့တယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အမြင့်ဆုံး အချိန် ၊ တဝဲလည်လည်အချိန် ၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ချိန်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင် အံ့သြစရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း ချမှတ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ .. သူ့ရဲ့ အကြောင်းတွေတစ်ချက်ခြင်းသွားလိုက်ကြရအောင်။
မာဆင်ဟာ ဒီစာကိုရေးနေတဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာဆိုရင် အသက် ၅၄ ရှိပါပြီ။ ၁၉၆၈ ခုနှစ် မတ် လ ၂၀ ရက်နေ့မှာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မြောက်လန်ဒန်သားလေး ပေါလ်ဟာ အာဆင်နယ်နဲ့ပဲ ကစားသမားဘဝကိုလဲ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ၁၉၈၄ ခုနှစ်။
အာဆင်နယ်လူငယ်လေး ပေါလ်မာဆင်ဟာ ဘရန်းဖို့ဒ်အသင်းမှာ အငှားသွားကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၁၉၈၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ မန်စီးတီးကိုရင်ဆိုင်ရင်း ဂန်းနားတို့အတွက် ပွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျော့ဂရေဟမ်ရဲ့အောင်မြင်သော ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များမှာ အတူတကွပါဝင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်အနဲငယ်အကြာ … ၁၉၈၈-၈၉ ရာသီမှာ မာဆင်က အသင်းရဲ့ညာတောင်ပံမှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေပြီ။ အဲ့ဒီနှစ်က သမိုင်းဝင်ပွဲစဥ် (အောက်မှာပူးတွဲဖော်ပြပေးထား) နဲ့ အမှတ်ပေးဖလားရရှိခဲ့တဲ့အသင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၊ ထိုရာသီအတွက် ၁၀ ဂိုးသွင်းခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ အဂ်လန် လူငယ်အသင်းမှာလဲ စတင်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး ကလောင်ရှင်များ ရွေးချယ်တဲ့ PFA Awards အတွက်လည်း လျာထားခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
(အထက်မှာ ရည်ညွန်းတဲ့ပွဲကို ဒီမှာဖတ်လို့ရပါတယ်)
သမိုင်းဝင်ပွဲစဥ်တစ်ပွဲ (Liverpool vs Arsenal 1989)
ဒါကအစောပိုင်းနှစ်များဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြ ဂရေဟမ်ထုတ်ပယ်ခံရပြီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာလည်း အာဆင်နယ်ရှေ့တန်းမှာ ကျောနံပါတ် ၁၀ ၊ ၉ နဲ့ ၁၁ တွေကိုဝတ်ဆင်ရင်း ဂိုးတွေသွင်းပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ ကျောနံပါတ်တွေကို တလှဲ့စီဝတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ ဂန္တဝင် Banana Kits ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းဂါးရောက်လာပြီး ဒုတိယနှစ်က သူ့ရဲ့ အာဆင်နယ်အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို အာဆင်ဝင်ဂါးက ၂ နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မာဆင်က တန်းဆင်းသွားရတဲ့ မစ်ဒယ်ဘရော့ဆီကိုသာလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ထက်အဆင့်နိမ့်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက် ထိုအချိန်က စံချိန်တင်ကြေး ဖြစ်တဲ့ ၄.၅ သန်းနဲ့ မာဆင်ကပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
မာဆင်ဟာ အာဆင်နယ်အတွက် ၁၂ ရာသီအတွင်း ပွဲပေါင်း ၄၂၃ ပွဲကစားပြီး ဂိုးပေါင်း ၉၉ ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အရပ် ၆ ပေမြင့်တယ်။ ဘားကင့်ရဲ အရှေ့က ဘားကင့်လို့ ပဲ ကျွန်တော့်အသက်အရွယ်အရ ကင်ပွန်းတပ်ရမှာပါပဲ။ ကိုယ်တွေက ဘားကင့်တောင်မှီလိုက်တယ်ဆိုရုံပဲကိုး။
မစ်ဒယ်ဘရော့ပြီးတဲ့နောက် အက်စတွန်ဗီလာ ၊ ပြီးတော့ ပို့စ်မောက် . အဲ့ဒီနောက်တော့ စိတ်ချမ်းသာသလို အသင်းငယ်တွေဆီမှာ တစ်ပွဲစ နှစ်ပွဲစကန်ရင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကျတော့မှသာ ဘောလုံးကွင်းကို အပြီးစွန့်ခွာသွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပရိုတစ်ယောက်လို ရာသီပြည့် သေသေချာချာကစားတာတွေကိုတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာကတည်းကရပ်နားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးလောက ကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာ မာဆင်ဟာ မီဒီယာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြောက်လန်ဒန်သားတစ်ယောက်ဟာ ဘောလုံးသမားဘဝကို အာဆင်နယ်နဲ့စတင်ခဲ့သလို မီဒီယာသမားဘဝကိုလဲ အာဆင်နယ် မီဒီယာမှာ ပဲစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ Daily Star မှာ ပုံမှန်ရေးသားရင်း အစီအစဥ်တွေမှာလဲ ပါဝင်တင်ဆက်လျှက်ရှိပါတယ်။
မာဆင်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကတော့ နဲနဲလေးရှတ်ထွေးပါတယ်။ အရက် ၊ ဆေးနဲ့ လောင်းကစားတွေတော်တော်လေးလုပ်ခဲ့ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးတွေနဲ့လည်းနီးစပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘဝရဲ့အမှားတွေကို ပြန်ပြောရင်းလဲ မျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရဲတွေကိုလဲ ပြဿနာရှာဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ အတူ အမှတ်ပေးချန်ပီယံအဖြစ် ၂ကြိမ် ၊ FA ဖလား ၁ ကြိမ် ၊ ဥရောပအဆင့် Cup Winner Cup တစ်ကြိမ်ရရှိဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမြောက်လန်ဒန်သားဟာ ကစားသမားဘဝတုန်းကလည်း နားလည်ရခက်တာတွေရှိခဲ့သလို လူမှုဘဝကလည်းစံပြမဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်။
သို့သော် သူဟာ မြောက်လန်ဒန်မှာမွေးဖွားပြီး မြောက်လန်ဒန်အတွက် ရှင်သန်ခဲ့သူဆိုတာကတော့ ထာဝရကဗ္ဗည်းတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နုပျိုခြင်းအားလုံးဟာ မြောက်လန်ဒန်အတွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Thanks for reading our content.
Tags: Arsenal, Legend, Old Days, Player Profile
ဒီဘရိုင်းနားနဲ့ လူကာကူတို့တောင် အချိန်တွေယူခဲ့ကြရတာပါ
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ (20May)